३७० खारेजपछि के हुन्छ अब कश्मीरको अवस्था ? थाहा पाउनुस् विस्तृतमा कश्मिर समस्याबारे - Everest Dainik - News from Nepal
३७० खारेजपछि के हुन्छ अब कश्मीरको अवस्था ? थाहा पाउनुस् विस्तृतमा कश्मिर समस्याबारे
जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खोस्ने भारतीय सरकारको निर्णयको कश्मीरी नेताहरूले विरोध गरेका छन्।
आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राखिएका ती नेताहरूले भारत को निर्णयप्रति तीव्र विरोध जनाइरहेका छन्।
जसमध्ये एक पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले आफू शब्दले वर्णन गर्न नसक्ने गरी स्तब्ध भएको बताएकी छन्।
उनले गाजा क्षेत्रमा इजरेल जस्तै अब भारत पनि कश्मीरमा ‘अतिक्रमणकारी फौज’ हुने बताइन्।
उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ आज भारतीय प्रजातन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन हो।”
“हामी जो कश्मीरको नेतृत्वमा छौँ, जसले ठूलो आशमा भारतसँग मिलेर दुई राष्ट्र सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेका थियौँ आज लाग्छ पाकिस्तानको सट्टा भारत रोजेकोमा हामी गलत थियौँ।”
कश्मीरको भूभाग दाबी गर्दै आएको पाकिस्तानले भारतीय निर्णयको कडा निन्दा गरेको छ। उसले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ।
इस्लामाबादस्थित विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, उसले यो निर्णयको विरोधमा सबै सम्भाव्य विकल्पको अभ्यास गर्नेछ।
कश्मीरको विशेष हैसियत उल्टाउने कदमलाई उसले ‘अवैधानिक’ भन्दै उक्त क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विवादित भनी चिनिएको बताएको छ।
उनले भने, “हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुस्लिम मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।”
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा प्रदर्शनकारीहरूले कालो झण्डा बोकेर भारत विरोधी नारा लगाउँदै विरोध जनाएका छन्।
तर भारतभरि कतिपयले सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै उत्सव मनाएका छन्।
मुम्बईमा शिवसेनाले कश्मीरको भारतमा एकीकरण पूर्ण भएको भन्दै मिठाइ बाँडेको छ।
भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएपछि भारतभित्रै त्यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यो निर्णयले कश्मीरमा थप सङ्कट निम्तिन सक्ने कतिपयको अनुमान छ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा एकै दिन दोस्रो धेरै संक्रमित, आज नै इरानलाई उछिन्ने सम्भावना
कश्मीर मामिलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदमले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ।
उक्त सम्झौताका क्रममा कश्मीर भारतमा विलय त हुन्छ, तर कश्मीरलाई केही विशेषाधिकार हुनेछन् भन्ने खालको मान्यता राखिएको थियो।
त्यसैका आधारमा भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५-ए को व्यवस्था भएको हो र त्यसै अनुसार कश्मीरको हैसियत विशेष रहँदै आएको हो।
कश्मीरले आफ्नो विवेकमा त्यहाँका जनताहरूको विशेषाधिकारको निर्णय लिनसक्छ भन्ने मान्यता थियो।
‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’मा तत्कालीन कश्मीरका राजा हरि सिंहले मेरो सहमति विना यसलाई उल्टाउन पाइनेछैन भनेका थिए। तर अहिले उनी जीवित छैनन्। अहिलेको निर्णयले उक्त ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’लाई नै चुनौती दिएको छ। धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
त्यसका नेता कामाप्रसाद मुखर्जी त त्यही कारणले जेल समेत गएका थिए। उनको सन् १९५३ मा जेलमै निधन भएको थियो।
त्यसकारण यो मुद्दालाई भाजपाले उठाउँदै आएको हो। तर भाजपाकै सरकार हुँदा पनि त्यसका प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले धारा ३७० लाई हटाउने सङ्केत दिएका थिएनन्।
विगतको चुनावमा भने त्यो धारालाई हटाउने स्पष्ट सङ्केत दिइएको थियो। र, त्यसको अगुवाई भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले गरेका थिए।
अहिले उनकै नेतृत्वमा धारा ३७० लाई खारेज गर्ने काम भएको छ।
अहिलेको निर्णयबारे के होला भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन। यसलाई सर्वोच्च अदालतमा कसैले चुनौति दिन्छ कि दिँदैन? अनि दिएमा त्यसमा के होला भन्ने कुरा अहिले नै भन्न गाह्रो छ। तर यो राजनीतिकभन्दा पनि जटिल संवैधानिक विषय चाहिँ बन्छ।
कश्मीरलाई भावनात्मक रूपमा भारतमा एकीकरण गर्न नसक्नु अहिलेसम्मको भारतको असफलता हो।
कतिपय पहिलेका सहमतिहरूमा पनि त्यो एकता पाइँदैन।
त्यस्ता सहमतिलाई परिवर्तन गर्नुपरे कसरी जनताको अनुमोदन खोज्ने भन्ने विषय पनि अब सँगसँगै जाला कि?
यो अनुमान मात्र हो, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसकारण यो विषय खुला छ, तर मुख्य रूपमा भारतभित्र र कश्मीरभित्र यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छन् त्यसका आधारमा बाहिरको मान्यतालाई पनि प्रभावित गर्ला।
याे पनि पढ्नुस भारतमा गहना व्यापारीको परिवारका ४ जना झुन्डिएको अवस्थामा फेला
ट्याग्स: कश्मिर, कश्मीर, जम्म कश्मीर, भारत